पुरुषले आफ्नो यी तिन अंग हेरोस भन्ने चाहन्छन महिलाहरु ! - Chitwan Online Khabar
सांसदको मूल्याङ्कन कानून निर्माणमा सहभागिताका आधारमा : तिमिल्सिना
धादिङ ट्रक दुर्घटना : सात जनाको मृत्यु, रक्सीको नशामा सवारी चलाउँदा दुर्घटना भएको घाइतेको भनाइ
तीन लाख पचार हजारले गरे महोत्सव अवलोकन
१२ भाद्र २०७६, बिहीबार १६:२३ chitwan online khabarNo Comment on पुरुषले आफ्नो यी तिन अंग हेरोस भन्ने चाहन्छन महिलाहरु !
एजेन्सी । प्रकृतिले महिला र पुरुषको शरीरमा जन्मदै भिन्नता दिएको हुन्छ । यसलाई चाहेरपनि मानिसले परिवर्तन गर्न सक्दैन । हुन त विज्ञानले केही चमत्कार गरेको छ । त्यसले प्रकृतिक धेरै चुनौती दिन सकेको छैन ।
विशेष गरेर महिलाहरूका अंग पुरुषका भन्दा आकर्षक हुन्छन् । बेलायतबाट प्रकाशित हुने एक न्यूज पोर्टलका अनुसार महिलाको छाती, कम्मर र उसको पछाडिको भाग (कम्मरभन्दा मुनि) लाई धेरैले नजर लगाउने गरेको पाइन्छ ।
महिलाहरूले पनि आफूलाई सुन्दर देखाउन ती भागहरूलाई जोडतोडले मिहेनत गरेर सुन्दर राख्छन् । पुरुषहरूका नजर पनि त्यतै जाने गरेका हुन्छन् । हाम्रो नेपाली समाज होस् वा पश्चिमा या भारतीयहरू नै किन नहुन महिलाहरू आफ्नो छातीलाई आकर्षक देखाउन ज्यान छाडेको प्रष्टै देख्न पाइन्छ छाती मात्रै होइन कम्मर र पछाडिको भाग पनि महिलाहरूले सकेसम्म पुरुषले हेरिदेओस् भन्ने चाहना राख्ने गरेको समचारमा उल्लेख छ ।
कृतिले महिला र पुरुषको शरीरमा जन्मदै भिन्नता दिएको हुन्छ । यसलाई चाहेरपनि मानिसले परिवर्तन गर्न सक्दैन । हुन त विज्ञानले केही चमत्कार गरेको छ । त्यसले प्रकृतिक धेरै चुनौती दिन सकेको छैन ।विशेष गरेर महिलाहरूका अंग पुरुषका भन्दा आकर्षक हुन्छन् । बेलायतबाट प्रकाशित हुने एक न्यूज पोर्टलका अनुसार महिलाको छाती, कम्मर र उसको पछाडिको भाग (कम्मरभन्दा मुनि) लाई धेरैले नजर लगाउने गरेको पाइन्छ ।
महिलाहरूले पनि आफूलाई सुन्दर देखाउन ती भागहरूलाई जोडतोडले मिहेनत गरेर सुन्दर राख्छन् । पुरुषहरूका नजर पनि त्यतै जाने गरेका हुन्छन् । हाम्रो नेपाली समाज होस् वा पश्चिमा या भारतीयहरू नै किन नहुन महिलाहरू आफ्नो छातीलाई आकर्षक देखाउन ज्यान छाडेको प्रष्टै देख्न पाइन्छ छाती मात्रै होइन कम्मर र पछाडिको भाग पनि महिलाहरूले सकेसम्म पुरुषले हेरोस भन्ने चाहना राख्ने गरेको समचारमा उल्लेख छ ।
७ माघ २०७६, मंगलवार २१:१५
रत्ननगर महोत्सव अवलोकन गर्ने दर्शकको सङ्ख्या तीन लाख
६ माघ २०७६, सोमबार १९:०९
रत्ननगर महोत्सव : आज प्रमोद खरेलको प्रस्तुति
६ माघ २०७६, सोमबार ०८:०२
फरार अभियुक्त १९ वर्षपछि परे पक्राउ
डिएसपीको रिमालको पहिलो सुरूवात, प्रहरीसगं स्कुल सम्पर्क कार्यक्रम
७ माघ २०७६, मंगलवार २१:५५
७ माघ २०७६, मंगलवार २१:३३
७ माघ २०७६, मंगलवार २१:२९
७ माघ २०७६, मंगलवार २१:२७